Madaxweyne Xasan oo Sacuudiga u tegay tacsida boqor Cabdalla Bin Cabdilcaziiz – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo Sacuudiga u tegay tacsida boqor Cabdalla Bin Cabdilcaziiz
A warsame 24 January 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Sheekh Maxamuud oo safar deg deg ah uga soo ambabaxay magaalada Muqdisho ayaa xalay gaaray magaalada Riyadh ee caasimadda Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo uu safarkiisu ku qotomay geeridii ku timid Boqor Cabdalla Bin C/casiis oo ahaa amiirkii dalkaas.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ay wehliyaan Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa halkaasi kaga tacsiyeynaya dadka iyo mas’uuliyiinta Sacuudi geerida ku timid Allaha u naxariistee Boqorka Dalkaasi.
Madaxweynaha ayaa la kulmi doona madaxda ugu sareysa wadanka Sucuudiga oo uu ka mid yahay boqorka cusub, Salmaan Bin C/caziiz.
Qaar badan oo ka tirsan madaxda dalalka Islaamka ayaa shalay ilaa xalay gaaray dalka Sacuudiga si ay dowladda iyo dadka dalkaas uga tacsiyeeyaan geeridii ku timid Amiir Cabdalla Bin C/caziiz oo habeen hore geeriyooday isagoo 90 sano jir ahaa.
Madaxweynaha dalka Turkiga oo xalay gaaray Jamhuuriyadda Jabuuti
Somaliland oo dekedda Berbera ku qabatay markab hub siday